မေဆွိ | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / မေဆွိ
Category Archives: မေဆွိ
ချိုချဉ်မျက်နှာ – မေဆွိ+နော်လီဇာ+ညိုညိုရိမ်+ဗစ်တာခင်ညို
1.အော်တိုထဲကရည်းစားစကား နော်လီဇာ 2.ဒီအခွင့်အရေးလောက်ဆိုကျေနပ်တော့ မေဆွိ 3.စာလွှာလေးနဲ့ကုစားမယ် ဗစ်တာခင်ညို 4.နွေနှောင်း မေဇွန် နော်လီဇာ 5.သို့ ညိုညိုရိမ် 6.မုန့်ပေးမကြိုက်ဘူး ဗစ်တာခင်ညို 7.ချိုချင်မျက်နှာ နော်လီဇာ 8.ဇနီးလည်းလွမ်းပါတယ် ညိုညိုရိမ် 9.စာအုပ်ပုံကြားကထွက်ခဲ့ပါ မေဆွိ 10.အကျဉ်းတန်တဲ့ငါ နော်လီဇာ 11.မင်းလျှောက်တတ်ပြီ ဗစ်တာခင်ညို 12.မသိလို့မေးတာလား ညိုညိုရိမ် 13.နှစ်သစ်မှာ နော်လီဇာ 14.မောင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့လား ညိုညိုရိမ် 15.ကိုးကားပြီးပြောတတ်တယ် မေဆွိ 16.မာနစိတ်လေးအလွမ်းပြေ ဗစ်တာခင်ညို 17.ဆေးကုဖို့ကောင်းပြီ ညိုညိုရိမ် 18.ခွင့်ပန်ခူးယူသူရယ် နော်လီဇာ Download link : http://www.mediafire.com/?e74vjrploy8pl3g Album tracks and cover credited to Bo Nay Linn and Ko Aung Zaw Htaik
April 8, 2013 Snuo Mwoani ဗစ်တာခင်ညို နော်လီဇာ မေဆွိ ညိုညိုရိမ် Leaveacomment
ရင်ထဲက ခွန်သန်းထွန်း – မေဆွိ
၁။ ကျောင်းတော်သာလွိုင်လင်မြို့ ၂။ မေရယ်ရှိမှမောင့်ဘဝ ၃။ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး ၄။ မောင့်အချစ်ဆုံးမုန်းသူ ၅။ အမုန်းပန်းကိုပြုံးလို့ခူးရင်း ၆။ လာလှည့်တော့နွေ ၇။ တဒင်္ဂထဲကတစ်ခဏဘဝ ၈။ နွေဆိုး (တစ်နေ့တစ်လံပေါ့ပုဂံရယ်) ၉။ ချယ်ရီရယ် တောင်ပြာရယ် နန်းရယ် ၁၀။ လာလမ်းနောက်လှည့် ၁၁။ အလာနှောင်းတဲ့ဆောင်း ၁၂။ ဖော်ဝေး ၁၃။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ၁၄။ ရှိစေတော့မောင့်ကို Download link : http://www.mediafire.com/?k8hu5ujmz6c1llh Credit – Ko Aung Zaw Htaik
March 23, 2013 Snuo Mwoani အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) မေဆွိ Leaveacomment
မေတ္တာပေါင်းကူး – မာမာအေး ၊ မေဆွိ
1. မြန်မာ့နေရာဟောင်း – မာမာအေး2. မှန်ကြိုက်သူ – မေဆွိ3. တစ်ဆောင်းသစ်ပြန်ပြီ 4. ရွှေဘုံပေါ်မှာစံချင်သူ5. ဘယ်မှာလဲအချစ်ရယ်6. ချစ်သူကိုယ်စား7. သစ်ခြောက်ပင်အောက်ပန်းကောက်သူ8. အဖြူသက်သက်မေတ္တာ9. သည်းငုံချစ်ပန်း10. မေတ္တာပေး၍ မေတ္တာမရ http://www.mediafire.com/?owvm8yo1e0sxh99 Credit – Ko Tin Tun
March 16, 2013 Snuo Mwoani အဆိုတော် (မ) မေဆွိ မာမာအေး Leaveacomment
မေဆွိ – ရင်ထဲကစိုင်းထီးဆိုင် ၂
၁။ နှင်းထုရဲ့ကြား ၂။ ငယ်ဖော်လို့ခေါ်သော်ရသောအချစ် ၃။ လှေငယ်ရှင်ဆုတောင်း ၄။ စိတ်ညှို့ရှင် ၅။ မင်းလေးရဲ့အပေါ် ၆။ နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာ ကျွန်းခံနေတယ် ၇။ မိုး ၈။ ဝေးနေချိန် ၉။ မင်းရှိမှပဲ ၁၀။ ရေလိုက်ငါးလိုက် ၁၁။ အချစ်ကမင်းအနားမှာပါ ၁၂။ ရေပျော်ငါး ၁၃။ အားငယ် ၁၄။စိုင်းပြန်ရဦးမယ် http://www.mediafire.com/?hn253v196xnvc21 Album credit to Bo Nay Linn and cover credit to Mgthura Nyunt
March 6, 2013 Snuo Mwoani အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) မေဆွိ Leaveacomment
နားပန်းဆံ – မေဆွိ
နားပန်းဆံ – မေဆွိ – (၁၉၉၄) ၀၁။ နားပန်းဆံ ၀၂။ သည်းနုရွယ် ၀၃။ မြင့်မိုရ်ထက်မြင့်သောနေရာ ၀၄။ အားနာပါတယ်ဟယ် ၀၅။ နေတစ်ရာနွေတစ်ရာ ၀၆။ စက္ကန့်လေးတွေစိန်စီထားမယ် ၀၇။ ချစ်ပြုံးမဉ္ဖူ ၀၈။ရင်တွင်းဆု ၀၈။ ပိတောက်ချစ်သူ ၀၉။ ဖြေလျော့ခွေ ၁၀။ တောင်ပြုံး Credit : U San Aung ကျွန်တော်တို့ ၄ တန်းလောက်တုန်းက နားထောင်ဖူးခဲ့သော မေဆွိသီချင်းလေးတွေပါ..
August 24, 2011 Snuo Mwoani အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) မေဆွိ 1 Comment